Uyenza njani kwakhona iAkhawunti yam ye-Instagram inyathelo ngenyathelo Follow ▷️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani kwakhona iakhawunti yam ye-Instagram inyathelo ngenyathelo
Oktobha 22, 2020 0 IiCententarios 623
Kuyaziwa ngamatyala angasebenziyo kwiakhawunti yabo kwi-Instagram kwaye njengoko ixesha lihamba, bafuna ukuzenza bazibuze kwaye bazibuze:Uyenza njani kwakhona iakhawunti yam ye-Instagram? Uyayazi imigaqo-nkqubo yenkampani yokungavumeli ukubuyiselwa kweakhawunti engasebenzi, kodwa siza kukuxelela into onokuyenza, silandele.
Uyenza njani kwakhona iakhawunti yam ye-Instagram?
I-Instagram yinethiwekhi yoluntu apho kupapashwa kunye neefoto nabo bonke abathathi-nxaxheba kweli qonga, kunye nentengiso ngale ndlela.
Ukuba unomdla wokuba nethuba lokujoyina le nethiwekhi, sicebisa ukuba undwendwele iqonga le-Instagram, kwaye ukuba ufuna ukuba nalo kwi-smartphone yakho, kuxhomekeke kwimodeli yeselfowuni, unokuyikhuphela ngqo.
Ukuze uphinde uvule iakhawunti ye-Instagram oyicimileyo, kuya kufuneka ulinde imigaqo emiselweyo, ngexesha lokubhalisa okanye lokubhalisa, apho bayazisa khona ukuba, ukuba ufuna ukuvala iakhawunti nabo, iakhawunti ayinakufumaneka. Kodwa, into onokuyenza kukuvula iakhawunti oyicimileyo okwethutyana.
Amanyathelo okuvuselela iakhawunti yam ye-Instagram ekhubazekileyo okwethutyana
Ukwazi Uyivuselele njani iakhawunti ye-Instagram okwethutyana kwaye uphinde ufumane ukufikelela, into ekufuneka uyenzile kukulandela la manyathelo alandelayo esiwacebisayo:
Khuphela kwaye uvule usetyenziso lwe-Instagram kwiselfowuni yakho.
Bhala igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ofuna ukulisebenzisa kwakhona kwi-Instagram.
Ukuba idatha oyifakayo ichanekile, ukusukela kuloo mzuzu unokufumana kwakhona iakhawunti ye-Instagram.
Kwimeko yokungalikhumbuli igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo, unokucela uncedo kwi-Instagram ngokuthumela ikhonkco ukuze ungene kwi-ID yakho ye-imeyile, kwaye ufumane ulwazi oludingayo ukuze uphinde ufumane iakhawunti.
Ukuba unomdla wokwazi impendulo ye Uyenza njani kwakhona iakhawunti yam ye-Instagram ekhubazekileyoSinokucebisa ukuba ubukele le vidiyo ilandelayo apho abasebenzisi be-Instagram banika uluvo lwabo kwaye banike iingcebiso zokufumana iiakhawunti ezikhubazekileyo:
Kwimeko yeakhawunti inxibelelene nenethiwekhi yoluntu enje nge-Facebook, inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo ilula kakhulu kwaye ke ukhetha indlela yokuyisebenzisa; ukusukela i-Instagram inerekhodi enkulu yempembelelo kwindawo yengqondo yomntu ngamnye kuba iyatshintsha isikhokelo, isikhokelo kunye nendlela yokubona izinto ngalo mzuzu wokukhumbula into eyenzileyo kunye nento eyenzayo.
I-Instagram inokuqokelela iinyani, iifoto, isenzo esidlulileyo nesangoku, ngexesha elichanekileyo, ixesha kunye nendawo yomthathi-nxaxheba ngamnye kwinethiwekhi yakho yoluntu, apho inani elikhulu labantu linokujonga umcimbi ngamnye, ukuba ubunqume ngaphambili ukuvumela zonke ezi zenzo.
Amanyathelo okuvula iakhawunti yam engasebenziyo
Ngokuchasene noko, ukuba ukhe wayivala iakhawunti yakho ngenxa yokuba bafuna ukuthoba isantya kwaye bakufihle kwabanye abantu, ukuba kunokwenzeka ukubuyela kufikelelo. Xa ucima iakhawunti ye-Instagram, into ekhulelweyo kukubeka lonke uphando olungenakwenzeka kwabanye abasebenzisi.
Ukuvula kwakhona kwaye ube neakhawunti yakho ye-Instagram kwakhona, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
Joyina i-Instagram application okanye uye kwiphepha lewebhu le-Instagram.
Ukufikelela ngesiqinisekiso somsebenzisi (nokuba ligama lakho okanye isibizo esisetyenzisiweyo) kunye negama lokugqitha elifanayo.
Xa ufaka iakhawunti yakho, iya kusebenza ngokuzenzekelayo kwakhona.
Instagram ivale iakhawunti yam yobuqu
Xa kusenzeka ukuba iakhawunti yakho ibhlokiwe okanye ingasebenzi, kuba i-Instagram ikohlwaye ngenxa yeemeko ezithile, ngenxa yokwaphula iimfuno kunye nemigaqo-nkqubo yokusetyenziswa kwayo; Kuya kufuneka uqinisekise umyalezo othunyelwe yinkampani apho ikuxelela khona ukuba zingaphi iintsuku zesohlwayo.
Kule meko, into omele uyilinde kukuba ixesha lesigwebo liyadlula kwaye ungangena kwakhona, ingcebiso enikezwe yinkampani kukuba awusayi kuphinda wenze isiphoso, kuba i-Instagram inokucinywa ngokusisigxina; Ezi zizathu zinokuba zezi zilandelayo:
Usebenzise i-Instagram API
Xa umxholo uposwe ngaphandle kwemvume evela kumbhali
Kwimeko yopapasho olunolwazi ngesondo
Xa umntu epapasha umxholo othobayo kwaye okhubekisayo kwabanye abantu
Ngexesha lokwenza imisebenzi ephindaphindwayo kwiqonga ngokungekho mthethweni
Xa ulwazi okanye iakhawunti eyeye-Instagram ithengiswa
Kwimeko apho bendiqhekeziwe nge-Instagram
Ukuqhawula, kubonisa ukuba omnye umntu usebenzisa i-akhawunti yakho kwaye utshintshe iphasiwedi; Kule mihla uninzi lwabaphangi lubonakala njengabasebenzi be-Instagram kunye nemiyalezo. Ukuba unokuthandabuza ukuba iakhawunti yakho ye-Instagram ibiwe ngokwenza into engalunganga, landela la manyathelo:
Kuya kufuneka uzame ukungena kwiakhawunti ye-Instagram kwaye utshintshe ipassword ngokukhawuleza nangxamisekileyo.
Ukuba awukwazi ukungena kwisicelo, kuya kufuneka ucofe apho ibonisa khona iphasiwedi kwakhona.
Kungenzeka ukuba awukwazi, kuba idatha yakho itshintshile, umyalezo uya kube ufikile kwidilesi ye-imeyile yakho ku support.instagram.com ekwazisa ukuba ubuyise utshintsho. Kuya kufuneka uvule umyalezo kwaye uqhubeke ngamanyathelo abonisa ukuba unokufumana kwakhona iakhawunti yakho ye-Instagram.
Ukuba awukwazi ukufaka imiyalezo yakho ngenxa yaso nasiphi na isizathu okanye loo myalezo awukafiki, landela amanyathelo akweli candelo: Andikwazi ukufikelela kwi-Instagram, ndenza ntoni?
Buyisa iakhawunti ye-Instagram ngokulibala iphasiwedi
Xa ufaka i-Instagram okokuqala, ukusukela kuloo mzuzu ulungiselela imibuzo yokhuseleko; ukubanakho ukungena kwimeko kaxakeka okanye ukuvalwa, apho acela khona uyilibele iphasiwedi yakho? Kwaye ngokunqakraza unokufumana kwakhona iakhawunti.
Ukuba kuyenzeka ukuba ungathumeli imiyalezo okanye ngefowuni, ungafikelela kwiakhawunti kwaye usenokucinga ukuba iakhawunti sele ingenakwenzeka ukuyifumana kwakhona, ngaphandle kokuba:
Ungaqhagamshelana nomntu okule fowuni yangaphambili ukucela uncedo ngekhowudi yokhuseleko, kwimeko apho inani litshintshileyo.
Ngendlela efanayo, zama ukufumana kwakhona ukufikelela kwi-imeyile, ngale khowudi oyifumeneyo.
Ukuba uqhagamshele igama lakho kunye negama lokugqitha kwinethiwekhi yoluntu ye-Facebook, yindlela ekhawulezayo yokufikelela.
Amanyathelo okuseta kwakhona iphasiwedi ye-Instagram kwi-app
Ukwenzela ukubuyisela iakhawunti, kufuneka kulandelwe la manyathelo alandelayo:
Ngenisa i-Instagram application
Xa ungena, kuya kufuneka ucofe indawo ekubhekiswa kuyo Ulibale iinkcukacha zakho zokungena? Fumana uncedo
Yongeza nayiphi na idatha eceliweyo efana negama lomsebenzisi, idilesi ye-imeyile okanye iselfowuni oyongeze kwiakhawunti yakho kwaye uchwetheze ngokulandelayo.
Khetha indlela yokufumana kwakhona iakhawunti yakho ye-Instagram ukuba nge-imeyile, iSMS okanye iFacebook
Kuxhomekeka kwindlela oyikhethileyo yokuqalisa ipaswedi yakho, uya kufumana ikhonkco apho unokwenza khona iphasiwedi entsha yokufikelela.
Emva kokwenza iphasiwedi entsha, uya kuba nakho ukufikelela kwiakhawunti yakho ye-Instagram kwakhona kunye negama eligqithisiweyo.
Amanyathelo okubuyisa iakhawunti ye-Instagram kwiPC
Amanyathelo alandelayo anokulandelwa kumqhubekekisi:
Yiya ku www.instagram.com
Cofa ku Uyilibele iphasiwedi?
Kuya kufuneka ubhale ezinye iinkcukacha zedatha ekubhekiswa kuyo, apho iakhawunti inxulumene khona, kwaye ucofe ngokulandelayo.
Emva koko uya kufumana isitshixo kwikhonkco elibonisiweyo kwaye uya kuba nakho ukuseta kwakhona iphasiwedi entsha.
Njengoko sele unepaswedi entsha ethunyelwe ngenkxaso ye-Instagram, unokufikelela kwiakhawunti yakho kwakhona kwaye wenze iphasiwedi entsha eyenziwe yaba yeyakho.
Ingcebiso ephambili: musa ukunika isitshixo okanye ipassword kuye nabani na, into onokuyenza kukudibanisa iakhawunti yakho ye-Instagram kwenye inethiwekhi yokuncokola ukuze ube nokufikelela ngexesha lokuvalwa okanye ukuthintelwa.
Sukuyaphula imigaqo ebekwe yi-Instagram kwaye utshintshe iphasiwedi rhoqo.
Ukuba ufuna ukufunda Indlela yokwazi ukuba ngubani okuvimba kwi-Instagram namhlanje? Kufuneka ufake ikhonkco kwaye uya kwazi yonke into.
1 Uyenza njani kwakhona iakhawunti yam ye-Instagram?
1.1 Amanyathelo okuvuselela iakhawunti yam ye-Instagram ekhubazekileyo okwethutyana
1.2 Amanyathelo okuvula iakhawunti yam engasebenziyo
1.3 Instagram ivale iakhawunti yam yobuqu
1.4 Kwimeko apho bendiqhekeziwe nge-Instagram
1.5 Buyisa iakhawunti ye-Instagram ngokulibala iphasiwedi
1.5.1 Amanyathelo okuseta kwakhona iphasiwedi ye-Instagram kwi-app
1.5.2 Amanyathelo okubuyisa iakhawunti ye-Instagram kwiPC
2 Iingcebiso zokugqibela
Uzibona njani iifoto ezithandwa ngumntu kwi-Instagram?
Kutheni le nto i-Instagram ingaze indivumele ndilayishe iividiyo?